Home Wararka (Faah Faahin) Masuuliyiin ku dhaawacmay Qaraxyadii maanta Muqdisho ka dhacay
(Faah Faahin) Masuuliyiin ku dhaawacmay Qaraxyadii maanta Muqdisho ka dhacay
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir, Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay taallada Daljirka Daahsoon ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaan katirsan Gollaha Shacabka oo lagu magacaabo Warsame Joodax ayaa isna ku dhaawacmay qaraxii koowaad oo ka dhacay Tiyaatarka Qaranka, kaasoo geystay khasaaraha uguu badan.
Wariye Cawil Daahir Salaad, oo kamid ahaa shaqaalaha Universal TV iyo saddex kale oo la socotay oo shaqo wadaag ahaayeen ayaa ku dhimatay qaraxa Tiyaatarka Qaranka.
Labada mas’uul ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qaraxii labaad ee ka dhacay Daljirka Daahsoon, iyadoo ay ku dhinteen qaar kamida ilaaladii la socotay, inkastoo aan tirada wali la xaqiijin.
Al Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxyadii maanta ka dhacay Muqdisho, iyadoo sheegtay inay ku beegsatay mid kamid ah baraha koonatarool ee laga ilaaliyo Villa Somalia, islamarkaana ay ku dileen saraakiil ciidan.
Qaraxyada ayaa kusoo beegmay xilli labo maalin kahor ciidamada booliska oo lagu wareejiyay amniga caasimadda ay u dabaal degeen sanad-guuradii 75aad ee aas-aaskooda.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Ka Hadashay Qaraxyadii Ka Dhacay Magaaladda Muqdisho
Next articleFahad Yasin oo saraakiil ka tirsan Boko Xaram lacag madax furasho ah ku iibsaday (Caddeyn)
Banka Carafo oo muslimiinta taagan yihiin maanta iyo diyaargarowga ciida
Wasaarada Warfaafinta XFS ayaa sheegtay in Wasiir Mareeye uunan shaqo ku...